तपाइँको ब्लग "A-list" मा पुग्दै Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 17, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
ठीक छ, अब जब म तपाईं यहाँ छु, पागल नहुनुहोस् र नछोड। म तिमीलाई के भन्छु सुन्नुहोस्।
निकोलस कारको ब्लग पोष्टि onमा अहिले ब्ल्गोस्फीयर भरि एक ज्वाला छ, महान अपठित. शेल इजरायल अन्य ब्लगर्स को एक टन को रूप मा, तर्क मा छ:उदाहरणका).
मैले के भन्नु पर्छ पढ्नु अघि तपाईले श्री कारको पूरा पोस्ट पढ्नु पर्छ। मलाई आशा छ कि म उसको सन्देश निष्पक्ष रुपमा संचार गर्दैछु ... मलाई लाग्छ उसले के भनेको छ कि त्यहाँ धेरै थोरै "A-list" ब्लगर छन् जुन सबैजनाले तौलियामा फ्याँक्नु पर्छ।
यदि तपाईं ब्ल्गोसियरको "A-list" मा पुग्न चाहानुहुन्छ भने, पहिले तपाईले त्यो सूची के हो निर्धारण गर्नु पर्छ। यो तपाईंमा निर्भर छ… निक क्यार हैन, टेक्नोराटी हैन, गुगल हैन, याहू होइन, टाइपपेड वा वर्डप्रेस हैन। "A-list" तपाईले पाउनु पर्ने हिटहरूको संख्या, पृष्ठ दृश्यहरूको भोल्युम, पुरस्कार प्राप्त गरेको पुरस्कार वा तपाइँको एड्सेन्स खातामा डलरको रकमले निर्धारण गर्दैन। यदि यो हो भने, तपाईं गलत कारणहरूको लागि ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ।
डग्लसकर.कॉममा स्वागत छ, महान अपठित मध्ये एक। (ठीक छ, सायद यो धेरै राम्रो छैन)
मुद्दा मा मिडिया मिडिया विज्ञापन को 'पुरानो स्कूल' हो। त्यो नियमले भन्छ कि अधिक नेत्रगोलले तपाईंको विज्ञापन देख्दछ, तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ। पुरानो स्कूलले भन्छ यदि तपाईं सयौं हजार पृष्ठ दृश्यहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सफल हुनुहुन्छ। एक दुई सय र तपाईं एक विफलता हुन पर्छ। तपाईं महान अपठितको अंश हुनुहुन्छ। यो ठ्याक्कै उस्तै सोच हो जुन चलचित्र उद्योग, अखबार उद्योग र नेटवर्क टेलिभिजनलाई तल तान्दै छ। समस्या यो हो कि तपाइँ ती आँखुहरूको लागि एक ठूलो मूल्य तिर्न, फिर्ती बिना। समस्या यो छ कि तपाईंलाई ती सबै आईबोलहरू चाहिदैन, तपाईले आफ्नो विज्ञापन सहि नेत्रगोलमा लिनु पर्छ।
मेरो "A-list" सेठ गोडिनको, टम पिटरको, टेक्नोराटीको, शेल इजरायलको, वा निक कारको साथ मेल खाँदैन। मलाई दस लाख पाठक चाहिएको छैन। हो, मेरो तथ्या st्क बढ्दै जाँदा म उत्साहित छु। अवश्य पनि म मेरो ब्लगमा पाठकको संख्या र पाठकहरूको वृद्धि गर्न चाहन्छु। तर म वास्तवमै मान्छेहरूसँग त्यस्तै समस्याहरू छन् र म जस्तो समाधानहरू खोज्दै छु भन्ने कुरामा रुचि छु।
म यो अर्ध-मार्केटिंग-टेक्नोलोजी-गीक-क्रिश्चियन-बुबा यार हुँ जो इण्डियानामा बस्दछ। म न्यु योर्क वा स्यान फ्रान्सिस्कोमा जाँदैछु। म धनी हुन खोजिरहेको छैन (तर मैले गुनासो गर्ने छैन!)। म ईण्डियानापोलिस र वरपर मार्केटिंग र टेक्नोलोजिष्टहरूको समूहसँग नेटवर्कि am गर्दैछु। म सिक्दै छु र 'मेरो' ​​जनतामा ब्लगिingको पर्दाफास गर्दैछु (सबै दुई दर्जन वा त!)। र म मेरो अनुभव, मेरो विचारहरू, मेरो प्रश्नहरू, र मेरो जानकारी रुचि राख्ने धेरै व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्दैछु।
तपाईले देख्नुहुनेछ, जब म शेल इजरायल, टम मोरिस, प्याट कोयल, मेरो परिवार, साथीहरू वा अन्य व्यक्तिहरू जसलाई म आदर गर्दछु र साझेदारी गर्दछन उनीहरूबाट टिप्पणी पाउँदछु ... मैले यो पहिले नै "A-list" बनाएको छु। यदि त्यो "A-list" को बारेमा तपाईको धारणा होईन भने त्यो ठीक छ। सायद म तपाइँमा हुन चाहन्न। हामी प्रत्येकले सफलतालाई फरक तरिकाले महसुस गर्छौं।
एक महान अपठित
माफ गर्नुहोस् माइक्रोसफ्ट, मलाई लाग्छ कि मलाई मुसाको गन्ध छ!
अगस्ट 17, 2006 बेलुका 10:09 बजे
मलाई लाग्छ तपाईंले यो एकदम सही भन्नुभयो। मानिसहरूले त्यहाँ लक्ष्यहरू मापन गर्न आवश्यक छ त्यहाँ आफ्नै अपेक्षाहरू। एकचोटि तिनीहरू पुग्छन्, अर्को चुनौतीमा।
अगस्ट 17, 2006 बेलुका 10:40 बजे
जाने बाटो - पूर्ण रूपमा सहमत।
मैले यस ए-लिस्टर षड्यन्त्रमा केही विचारहरू विकास गरें।
"अर्ध-मार्केटिंग-टेक्नोलोजी-गीक-क्रिश्चियन-फादर ड्युड" बिट, btw मा ठूलो प्रशंसा। म आफैलाई उस्तै वर्णन गर्न सक्छु!
अगस्ट 18, 2006 मा 3: 52 AM
राम्रो कमेन्ट र ग्रेट पोस्ट। म लिङ्क गर्नेछु। धन्यवाद
अगस्ट 18, 2006 मा 6: 34 AM
र याद गर्नुहोस्, येशूले हजारौंलाई प्रचार गर्नुभयो, तर उहाँले मात्र तालिम दिनुभयो 12। र ती बाह्र विश्वासी थिए। अनि हेर कहाँ गयो !!